Global Voices teny Malagasy » Nanatontosa Fanentanana Hanafoanana Ny Lalàna Manenjika Mpitrifana Nanamelohana Azy Ilay Bilaogera Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Nanatontosa Fanentanana Hanafoanana Ny Lalàna Manenjika Mpitrifana Nanamelohana Azy Ilay Bilaogera Rosiana
Voadika ny 09 Desambra 2016 4:44 GMT 1	 · Mpanoratra Isaac Webb Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Nanatontosa fanentanana hanesorana ny lalàna nohitsakitsahany ka nanamelohana azy tsy ho ao anatin'ny Fehezan-dalàna Ady Heloka Bevava Rosiana i Anton Nossik, bilaogera malaza nampandoavina lamandy 500.000 robla (8.000 dolara) tamin'ny Oktobra noho ny lahatsoratra tao amin'ny LiveJournal izay niantso an'i Rosia mba “hamafa an'i Syria tsy ho eo ambonin ‘ny tany”. Lalàna mahatratra ny zava-drehetra ny lalàna andininy faha-282, izay mandràra  ny “hetsika mandrisika fankahalana na manangana fahavalo, na fanivaivana ny fahamendrehan'ny olona na ny vondron'olona noho ny maha lahy na vavy, noho ny firazanana, ny zom-pirenena, ny fiteny, ny fiaviana, ny fihetsika manoloana ny fivavahana, na noho ny maha ao anatin'ny sarangam-piarahamonina iray, raha natao imasom-bahoaka na tamin'ny fampiasana haino aman-jery ireo zavatra ireo”, ary dia nohelohina  noho ny fahasiahana loatra sy ny fanitsakitsahana ny zo fototra: mety ho meloka ny olona iray na dia tsy nitarika herisetra aza ny zavatra nataony, ary hatramin'ny nampidirana ilay lazaina fa Lalàna Yarovaya  tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia mety ho voaheloka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
Taorian'ny fampandoavana lamandy, nandefa  ny soso-keviny tany amin'ny “Fisantaran'Andraikitry ny vahoaka Rosiana” (ROI), tranonkala natao hifantenana ireo soso-kevitra avy amin'ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny governemanta federaly i Nossik. Efa ho roa volana tatỳ aoriana, nahazo valiny avy amin'ny ROI izy, izay milaza fa nekena ny tolo-keviny ary navoaka tao amin'ny tranonkala nanomboka tamin'ny 30 Novambra. Afaka mifidy eny na tsia amin'ny fanangonan-tsonia hatramin'ny 30 Novambra 2017 ny Rosiana 18 taona no mihoatra, ary nisoratra anarana tamin'ny alalan'ny vavahadin-tseraseram-panjakana. Mila fanohanana 100.000 ny tolo-kevitra vao azo alefa any amin'ny governemanta federaly mba hiadian-kevitra.
Hoy ny vakin'ny fanangonan-tsonia:
Novolavolaina fatratra ny andininy faha-282 ao amin'ny Fehezan-dalàna Rosiana momba ny Heloka bevava, “hetsika nokendrena hitarika fankahalana na fifandirana” mba ahafahana manao fanararaotam-pahefana goavana, fandikàna araka izay tiana, ary mametraka fototra fanenjehana ny “heloka noho ny eritreritra. ” Tsy misy antontan-kevitra iray na fanapahan-kevitra ara-pitsarana iray manonona hoe fanambaràna tahaka ny ahoana no faritana fa “mitrifana”, ary inona no voaaron'ny lalàmpanorenana ho fahalalahana miteny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nahita fitomboan'isa hatrany isika fa nampiasana hanenjehana mpisintaka ara-kevitra ity lalàna ity, mba hanafoanana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, anisan'izany ny tantara manokana manakiana ny manam-pahefanan'ny fiarovana isam-paritra sy ny asam-bahoaka ataon'izy ireo. Nisy ihany koa ireo fotoana itoriana olona kisendrsendra amin'ity lalàna hanaovana “fampisehoana” fotsiny, izay tafiditra ao anatin'ny “ady amin'ny mpitrifana” ataon'ny sampan-draharahan'ny fiarovana. Nandritra ny 21 taona nisiany, nasiam-panovana imbetsaka ity lalàna ity, ary lasa miha-henjana hatrany. Na izany aza, tsy ahitana famaritana mazava ny atao hoe “mitrifana” izany.
“Tonga ny fotoana hanaovana zavatra miaraka,”Hoy i Nossik nanoratra  tao amin'ny kaonty LiveJournal tamin'ny Asabotsy. “Tokony atao ary ilaina ny manaparitaka rohy, mizara, mamerina sioka, mitia, mandefa vaovao araka izay betsaka ny zava-misy fa vonona hofidiana ny fandraisana an-tanana … Raisina soa aman-tsara ny famoronana ara-maso. Koa miangavy, manaova sora-baventy [sy] sary ao amin'ny Instagram, izay karazana hatsaran'endrika mila aparitaka … “
Nampiasa hatrany ny andininy faha-282, matetika fantatra ho “lalàna iadiana amin'ny mpitrifana” ny fitsarana Rosiana mba hanampenam-bava ny mpanohitra: tamin'ny 2015 fotsiny ohatra, olona 414 no voaheloky ny lalàna, nitombo 137 isa noho ny tamin'ny taona 2011. Ankoatra ny fanoherana iraisam-pirenena, dia notsikerain'ireo Rosiana mpanao lalàna ho mivelatra loatra, ka mahatonga ny fitsarana hanameloka ny olona noho ny ara-politika fa tsy noho ny antony fandikan-dalàna ilay lalàna. Tany am-piandohan'ity taona ity, nampiditra volavolan-dalàna  hanafoana ny andininy faha-282 tao amin'ny Duma-mpanjakana i Mikhail Degtyarev, Alexei Didenko sy Ivan Sukharev, mpanao politika avy amin'ny Antoko Liberaly Demaokraty ao Rosia. Notakiana ny fanafoanana ny volavolan-dalàna satria manoka-baravarana hanenjehana “olom-pirenena noho ny fomba fijery ideolojika samy hafa.”Tsy lany ny volavolan-dalàna ary mbola manan-kery ny andininy faha 282″.
Tamin'ny Talata, namoaka Fanontaniana sy Valiny ho an'ny mpamaky azy ao amin'ny pejy LiveJournal i Nossik, manasongadina ny antony hanohanana ny fanangonan-tsonia. Ny andininy faha-282, hoy izy: dia lalàna “tsy nodinihana ny tombontsoany, fa mahabetsaka ny isan'ny fanararaotam-pahefana. Ny fihenjanan'ny andininy faha-282 dia ahafahana manenjika ireo mpandrindra zavakanto sy mpisera VKontakte izay mamoaka sariitatra manohitra ny fanavakavahana ihany koa.
Ahoana no fomba hiadian'ny manampahefana ny mahery fihetsika, ny fanavakavahana sy ny fankahalana vahiny raha hofoanana ny lalàna? Am-polony mahery ireo lalàna Rosiana momba ny heloka bevava sy ny fitantanana ny hetsika extremista izay mahatonga ireo mpandika lalàna ho tompon'andraikitra noho ny hetsika manokana sy noho ny fandraisana anjara tamin'ny fikambanana mahery fihetsika sy mpampihorohoro. Ny andininy faha-282 dia mampitovy ny hetsika amin'ny fanehoana ny ao an'eritreritra, amin'ny fanehoana hevitra, ary koa ny fanekena ny tenin'ny hafa mihitsy aza. Koa amin'ny fampiharana azy ankapobeny, manohintohina ny tena ady amin'ny heloka bevava ateraky ny tsy fifandeferana ara-poko sy ara-pivavahana ny andininy faha-282 , mamily lalana ny fitaovana fampiharana ny lalàna [hanenjika ireo] hetsika tsy mampidi-doza ny fiarahamonina akory.
Tena olana tokoa ve izany? Olona an-jatony isan-taona no hita fa meloka noho ny fanitsakitsahana ny lalàna andininy faha-282. Ny fanenjehana ny heloka noho ny eritreritra dia mety hanosika ny manampahefam-piarovana hanao fanenjehana. Mora kokoa ny mamantatra izay “adala” mampiasa Google sy ny Yandex noho ny misambotra izay tena mpanao heloka bevava eny an-dalana, izay manao asa miafina any amin'ny tontolon'ny mahery fihetsika ambanin'ny tany, ary manangona fikafika. Ka nitombo toy ny fivontosan'ny homamiadana tao anatin'ny taona vitsy ny fanenjehana eo ambanin'ny lalàna andininy faha-282, raha tsy mahita fisorohana izay tena heloka bevava isika, mandritra izany. Noho ny fitomboan'ny fironana hanenjika olona amin'ny andininy faha-282 nandritra ny dimy taona farany, mety hahita fitomboan'isan'ny voampanga ho an'arivony isika amin'ny taona 2017, raha manatona ny zerô ny isan-jaton'ny fanenjehana azo hamarinina araka ity lalàna ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/09/93170/
 Lalàna Yarovaya: http://www.icnl.org/research/library/files/Russia/Yarovaya.pdf
 voaheloky : http://www.rbc.ru/politics/05/05/2016/572aad469a794740dc3dca0e
 nampiditra volavolan-dalàna: http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160615_ldpr_282_request
 Fanontaniana sy Valiny : http://dolboeb.livejournal.com/3069343.html